ကရင်ပြည်နယ် - Gpedia, Your Encyclopedia
၆ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
၆.၁ အခြား မြို့ရွာများ
၈ ဖွံ့ဖြိုးမှု အချက်အလက်များ
၁၁.၂ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သောပွဲတော်များ
၁၁.၄ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်သောပွဲတော်များ
၁၁.၅ ကရင်အမျိုးသားများ၏ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်
၁၁.၈ ရေမြောင်း တာတမံနတ်ပူဇော်ပွဲ
၁၁.၉ တောင်ယာ စပါးရိတ်သိမ်းပွဲ
၁၁.၁၀ စပါးပုံ လိပ်ပြာခေါ်ပွဲ
၁၁.၁၁ လယ်နတ် တင်ပွဲ
၁၁.၁၂ တောင်ယာ နတ်တင်ပွဲ
၁၁.၁၃ တောင်ယာ စပါးရိတ်သိမ်းပွဲ
ကရင်ပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်တည်ရှိတည်ရှိပြီး မွန်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိသည်။ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၅ ဒီဂရီ ၁၉ မိနစ် မှ ၁၉ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ် အတွင်း၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၀မိနစ် မှ ၉၈ ဒီဂရီ ၅၅ မိနစ် အတွင်း တည်ရှိသည်။ ဧရိယာစုစုပေါင်း ၁၁၇၃၀.၈၅၁ စတုရန်းမိုင် ကျယ်ဝန်းသည်။ အရှေ့မှ အနောက်သို့ ၇၀ မိုင်ရှိပြီး တောင်မှမြောက်သို့ ၃၂၆ မိုင် ရှည်လျားသည်။
ကရင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်မှာ ဘားအံဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၀ဝ၀) ကျော်က သံလွင်မြစ်ကမ်းနဖူးတွင် စုစုပေါင်းအိမ်ခြေ (၂၀ဝ) ခန့်ရှိ ရွာလေးတစ်ရွာသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ရွာကလေးတည်ရာသံလွင် မြစ်၏ကမ်းစွယ်တွင်အဓိကရ ကျောက်စွန်းကြီးတစ်ခုရှိသည်။ ထိုစွန်းကို ယိုးဒယား၊ ရှမ်းဘာသာဖြင့်ဖား အမ်း (ကျောက်+အစွယ်)ဟု ခေါ်ခဲ့သည်။ ဖားအမ်းမှတစ်ဆင့် အသံအနည်းငယ်ပြောင်း၍ ဘားအံဟုအမည် တွင်လာသည်။ ၁၉၀၇ ခုနှစ်တွင်မြို့ကွက် ရိုက်ခဲ့သည်။ ဘားအံမြို့နယ်တွင် ထင်ရှားသောတောင်သည် ဇွဲကပင်တောင်ဖြစ်သည်။ ဇွဲကပင် ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော် တည်ထားသည်။ ဘားအံမြို့မှ သံလွင်မြစ်ညာ ရှစ်မိုင်ခန့် ကအကွာ ကော့ဂွန်းတောင်၏ အရှေ့ဘက်၌ ကော့ဂွန်းဂူရှိသည်။ ဘားအံ၏ အနောက်ဘက် (၁၂) မိုင်ကွာအရပ်၌ ဘုရင်ဂျီဂူ (ဘုရင့်ညီဂူ) ရှိသည်။ ဂူ၏အောက်ခြေတွင် ရေပူစမ်းအိုင်ရှိသည်။ ရေပူစမ်း၊ ရေအေး စမ်းနှစ်ခုယှဉ်လျက် စီးဆင်းလျက်ရှိသော်လည်း ရေပူနှင့်ရေအေး ပေါင်းစပ်ခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရ သည်။
မြို့ (၁၈)မြို့ ရှိသည်။
ရပ်ကွက်ပေါင်း (၈၄) ကွက် ရှိသည်။
ကျေးရွာအုပ်စု (၃၇၆) အုပ်စု ရှိပြီး
ရွာပေါင်း (၂၀၉၆) ရွာ ရှိပါသည်။ 
အော်ပွဲဟူသော အခေါ်အဝေါ်မှာ မြန်မာများ၏ အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်သည်။ ရှေးအခါက ဩပွဲဟု မြန်မာ များက ခေါ်သည်။ ကရင် အပျို လူပျိုများသည် ဩသံကြီးဖြင့် ကဗျာ လင်္ကာတေးသီချင်းများကို အပြန်အလှန် ဆွဲဆွဲငင်ငင် အောဆို ကျူးရင့်ခြင်းကြောင့် ဩပွဲဟု ခေါ်ရာမှ ယခုအခါ အော်ပွဲ ဟုပြောင်းလဲခေါ်ဆိုလာခြင်း ဖြစ်သည်။
အော်ပွဲဆိုသည်မှာ လူပျိုကာလသားများ၏ ကာယဗလပြပွဲဖြစ်သည်။ လူပျိုကာလသားများသည် အကျီ ကို ချွတ်၊ ခါးတောင်းမြှောင်အောင်ကျိုက်၍ မိမိတို့၏ကျန်းမာထွားကျိုင်းသော ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် သန့်ရှင်းသောကိုယ်အရေပြားကို အမျိုးသမီးပရိတ်သတ်ရှေ့တွင် ထုတ်ဖော်ဝင့်ကြွားပြသသောပွဲ၊ လက်ခမောင်း ကို တဖြောင်းဖြောင်း ခတ်၍ လက်ဝှေ့ရေးပြသသော ပွဲဖြစ်သည်။ ယင်းပွဲသို့ ယောကျ်ားမပီသသူများ၊ ကိုယ် ရေပြားရောဂါရှိသူများ၊ မမာမကျန်းသူများ မလာဝံ့ကြချေ။
ကရင်အမျိုးသားများ၏ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်မှာလည်း ထင်ရှားသော ပွဲတော်တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ကရင်အမျိုးသားများသည် နှစ်ဟောင်းကုန်ပြောင်း၍ နှစ်သစ်မင်္ဂလာကို ကြိုဆိုခြင်း၊ နှစ်သစ်တွင် ကောက်ပဲ သီးနှံပေါများရန် ဆုတောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်ကြသည်။ ကရင်အမျိုးသားတို့သည် နှစ် သစ်ကူးမင်္ဂလာပွဲတော်ကို ပြာသိုလဆန်း(၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပကြသည်။ ကောက်ဦးပေါ်ချိန်ဖြစ်၍ ရရှိသောသီးနှံများကို ဘုရားအား ရည်စူးပြီး ဦးဦးဖျားဖျား အလှူဒါန ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။ မင်္ဂလာအခါဖြစ်သည့် နှစ်သစ်ကူးပွဲတွင် တပျော်တပါးစုပေါင်းစားသောက်ကြပြီး စုဝေးရောက်ရှိလာ သူများ စုပေါင်း၍ကကြသည်။ စုစည်းမှု သရုပ်ဖေါ် ဒုံးအကများလည်းကလေ့ရှိသည်။
စပါးပုံ လိပ်ပြာခေါ်ပွဲမှာ ကောက်လှိုင်းများ တလင်းကွင်း၌နယ်၍ ပြီးသောအခါ စုပုံထားသော စပါးပုံကြီး အတွက် လိပ်ပြာခေါ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ လိ်ပ်ပြာခေါ်ပြီးမှ ခြင်တွယ်ပါက စပါးပိုမို ထွက်သည်ဟု ယုံကြည်ကြ သည်။ ကျီသွင်းသောအခါတွင်လည်း စပါးလိပ်ပြာ မလွင့်နိုင်ဟု အယူရှိကြသည်။ စပါးပုံလိပ်ပြာခေါ်ပွဲကို အရှေ့ရှို (ပိုး) ကရင်ဘာသာစကားဖြင့် ‘ကိုးဖီးဘူးယော်’ ဟုခေါ်သည်။ အဖွားစပါးလိပ်ပြာခေါ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ မြန်မာလို ကောက်ဆိုင်ပုံ ထိုးသည်ဟူ၍ လည်းခေါ်သည်။ ကိုးဖီးဘူးယော် ပသပုံမှာ ကောက်လှိုင်းသိမ်းအပြီး တလင်းအတွင်း ကောက်လှိုင်းများစုပုံရောက်ရှိပြီးသည့်အခါ ကောက်လှိုင်းပုံပတ်လည်တွင် ဝါးတိုင်ကိုးတိုင်ထူ ရသည် ကောက်လှိုင်းပုံထက်မြင့်ရသည်။ ဝါးတိုင်ထိပ်တွင် ခြင်းငယ်ဖြင့် ကောက်ညှင်း (၇) ထုပ် ငှက်ပျောသီး (၇) လုံး၊ ကြက်မောက်ပန်း (၇) ခက်တင်ရသည်။ ဝါးတိုင်များသည် ကောက်လှို်င်းပုံဘက်သို့ ညွှတ်ကိုင်းကိုင်းနေ ရသည်။ စပါးနယ်ခါနီးတွင် ဝါးတိုင်များကိုဖြုတ်၍ စပါးပုံပေါ်တင်ရသည်။ ထို့နောက် ကလေးများက လုယူစား သောက်ကြသည်။ ဤသည်ကို ‘ကိုးဖီးဘူးယော် ပသပွဲ’ ဟုခေါ်သည်။ ဤပသပွဲမှာ တစ်ဒေသနှင့် တစ်ဒေသမတူ ချေ။
လယ်နတ်ကို ‘တလာတိုက်’ ဟုခေါ်သည်။ နယုန်၊ ဝါဆိုလများတွင် လယ်ကွင်းထဲ၌ လယ်နတ် တင်ကြ သည်။ ကန်သင်းဘေး၌ တဲအိမ်ငယ်ဆောက်လုပ်၍ ငါးသုံးကောင်၊ ထမင်းတစ်ပန်းကန်၊ ကွမ်းတရာ၊ ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်ဖြင့် လယ်နတ်တင်ကြသည်။ ယင်းသို့ တင်မြှောက်ပြီး လယ်ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန် လူနှင့် တိရိစ္ဆာန်များ ဘေးရန်မှ ကင်းဝေးရန်၊ ပိုမွှားစသော အနှောင့်အယှက် အဖျက်အစီးများမှ ကင်းဝေးရန်၊ ဆန်စပါး ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်စေရန်ဆုတောင်းရသည်။ အချို့ဒေသများတွင် တော်သလင်းလ၌ လယ်နတ်တင် သည်။ ကောက်ညှင်း၊ နှမ်း၊ ရေ၊ ဖယောင်းတိုင်တို့ဖြင့် သက်သတ်လွတ်တင်ကြသည်။ အလားတူ ဆုတောင်းရ သည်။ ယင်းသို့ လယ်နတ်ကို မတင်ပါက လူ၊ တိရိစ္ဆာန်တို့ကို ဒုက္ခပေးတတ်သည်၊ စပါးပျက်ဆီးတတ်သည်၊ အထွက် ညံ့တတ်သည်ဟု ယုံကြည်စွဲလမ်းကြသည်။
↑ (May 2015) Census Report, The 2014 Myanmar Population and Housing Census 2. Naypyitaw: Ministry of Immigration and Population, 17။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ ၂.၆ ၂.၇ ၂.၈ ကရင်ပြည်နယ်၏ ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ။ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရ။ ၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၀၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population MYANMAR (July 2016). The 2014 Myanmar Population and Housing Census Census Report Volume 2-C. Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population MYANMAR, 12–15။
↑ မေမြို့ချစ်ဆွေ (၂၀၀၀). မြန်မာပြည်ဖွား ဂေါ်ရခါး။
မွန်ပြည်နယ် မယ်ဟောင်ဆောင်ခရိုင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကရင်ပြည်နယ်&oldid=454126" မှ ရယူရန်
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ မှ တိုးချဲ့ရန် လိုအပ်သည့် ဆောင်းပါးများ
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ မှ ဗလာအပိုင်းများပါသည့် ဆောင်းပါးများ